बाढी अाउँदै छ कि ? यसरी थाहा पाउनुहोस् - Nature Khabar Complete Nature News
वर्षायाम सुरु भएसँगै मनसुन सक्रिय भएको छ । लगातारको अविरल वर्षासँगै देशका केही ठाउँमा डुवान भएको छ । नदीहरुमा पानीको सतह बढेको छ । बाढी र पहिरोको जोखिम पनि उतिकै छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अनुसार पानीले भिजेको जमिन भासिने र पहिरो जान सक्ने भएकोले त्यसतर्फपनि सचेत हुनु बाढी पूर्वसूचना सेवाले जनाएको छ ।
नजिकैको खोलामा पनि बाढी आउँदै छ कि ? यसरी थाहापाउनुहोस्ः